INgxelo Belmont uxoxa ukuba umgaqo lezoBulungisa ijonge ngokungqalileyo ekusasazeni bezihlabo kunye neenzuzo nophando. Oko kukuthi, kufuneka ukuba ibe kwimeko yokuba elinye iqela eluntwini uthwala iindleko zophando ngexesha elinye iqela nenzuzo yayo. Ngokomzekelo, kwinkulungwane ye-19 nasekuqaleni 20, imithwalo lokukhonza izifundo zophando kumalingo onyango yawa kakhulu amahlwempu, yaye iingenelo eziphuculiweyo unyango ahamba ikakhulu kubantu abazizityebi.
Ukuziqhelisa, umgaqo Lezobulungisa ekuqaleni evakalayo ngeenxa ingcamango yokuba abantu abasemngciphekweni kufuneka ukhuselwe abaphandi. Ngamanye amazwi, abaphandi kufuneka bavunyelwe ukuba ixhoba ngabom phezu abanamandla. Ngumzekelo kokugxojwagxojwa ukuba kwixesha elidlulileyo, inani elikhulu izifundo yokuziphatha yingxaki baye bathatha inxaxheba kakhulu abasemngciphekweni kuquka abemi kakubi abafundileyo kwaye disenfranchised (Jones 1993) ; amabanjwa (Spitz 2005) ; kumaziko, abantwana abakhubazekileyo ngengqondo (Robinson and Unruh 2008) ; kwaye izigulane esibhedlele endala nabayimilwelwe (Arras 2008) .
Noko ke, ngeenxa 1990, izimvo lezoBulungisa waqalisa ezijikela ikukukhusela ukufikelela (Mastroianni and Kahn 2001) . Umzekelo, amatsha ababesithi abantwana, abasetyhini, yaye amaqela eentlanga kwakufuneka zifihlwe zibandakanywe kumalingo onyango ukuze amaqela angenelwe ulwazi olufunyenwe ezi zilingo.
Ukongezelela imibuzo malunga nokhuselo kunye nofikelelo, umgaqo noMoni kaninzi evakalayo zokuphakamisa imibuzo malunga imbuyekezo efanelekileyo abathathi-neembuzwano kuxhomekeke ingxoxo gqitha yezonyango (Dickert and Grady 2008) .
Ukusebenzisa umgaqo lezoBulungisa kule mizekelo ezintathu unika enye indlela sizihlole. Nxaxheba namnye zophononongo ziye babuyekezwe ngemali. Elithile kuphakamisa imibuzo oluntsonkothileyo ngalo mgaqo lezoBulungisa. Nangona Umgaqo Beneficence sinokucebisa ngaphandle nxaxheba abavela kumazwe noorhulumente wakwa, umgaqo Justice ubeya nxamnye bemkhanyela aba bantu ulwenzeko nxaxheba kwi-kwaye kuxhamla-echanekileyo imilinganiselo ci Internet. Ityala Ukungcamla, sies, kwaye Ixesha ikwavelisa imibuzo. Kulo mzekelo, elinye iqela labafundi uthwala imithwalo uphando kunye noluntu iingenelo iphela. Ukuze icace, nangona kunjalo, oku amanani ingakumbi abasemngciphekweni. Okokugqibela, kwi Emotional njengesifo-nxaxheba aba isampuli abemi abadla kuxhamla iziphumo zophando, imeko zilungelelaniswe kakuhle kunye nomgaqo Justice.